ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
‘Ngangiqala ngqá ukuthola injabulo ekuphileni kwami.’
UHILTON wayesithanda isibhakela. Waqala ukulwa eneminyaka engu-7—elwa ngaphakathi nangaphandle kwenkundla yesibhakela! Lapho esesesikoleni samabanga aphakeme, wayezulazula isikole sonke nabangane, efuna azomshaya. Uthi, “Ngangintshontsha, ngigembula, ngibuka izithombe ezingcolile, ngihlukumeza abesifazane, ngithuka nabazali bami. Ukuziphatha kwami kwenza abazali bami bacabanga ukuthi ngeke ngisashintsha. Ngemva kokuphothula esikoleni samabanga aphakeme, ngahamba ekhaya.”
Lapho uHilton ebuyela ekhaya ngemva kweminyaka engu-12, abazali bakhe abakholwanga ukuthi kwakuyindodana yabo lena! Wayezolile, elalela futhi ehlonipha. Yini eyamenza wenza izinguquko ezinkulu kangaka? Phakathi nesikhathi asichitha engekho ekhaya, waqala ukucabangisisa ngokwakuzokwenzeka ngokuphila kwakhe. Wahlola nalokho okushiwo yiBhayibheli ukuze abone ukuthi lingamsiza yini ashintshe izindlela zakhe. Uthi, “Ngakusebenzisa lokho engangikufunda eBhayibhelini, lokho okwasho ukuthi kufanele ngilahle ubuntu bami obudala, futhi ngilalele nomyalo okweyabase-Efesu 6:2, 3 wokuhlonipha abazali bami. Kwakungokokuqala ngqá ngithola injabulo yangempela ekuphileni kwami, futhi ngijabulisa abazali bami, esikhundleni sokuqhubeka ngibazwisa ubuhlungu!”
Indaba kaHilton, igcizelela kokubili ukuba usizo kwezimiso zeBhayibheli kanye namandla azo okuguqula. (Hebheru 4:12) Ake sicabangele ezinye zalezo zimiso—okuwubuqotho, ukuzithiba, ukwethembeka kanye nothando—sibone indlela ezingakucebisa ngayo ukuphila kwethu.
INGABE SELIPHELELWE YISIKHATHI?
Abanye bathi iBhayibheli lifana nencwadi yeziqondiso ye-computer engasasebenzi, bathi liphelelwe yisikhathi. Kodwa lokho kuqhathanisa kukha phezulu futhi kuyakhohlisa. Ama-computer ayashintsha aphelelwe yisikhathi, kanjalo nezincwadi zawo. Indlela abantu abakheke ngayo ayishintshi. Ngokwesibonelo, indlela abantu namuhla abasabela ngayo ngokuphathelene nokubonisa uthando nenzondo, ukwethembeka nokungathembeki, umusa nonya, iyefana nendlela okhokho bethu ababesabela ngayo. Ngakho uma sekuziwa ezintweni eziyisisekelo, “ayikho into entsha ngaphansi kwelanga.”—UmShumayeli 1:9.